Taona 2011 – Jona – Tsodrano
1/6 > Romana 8 : 31
« Iza no hahasaraka antsika amin’ny fitiavan’i Kristy? fahoriana va? sa fahantrana, sa fanenjehana?, sa mosary, sa fitanjahana?, sa sabatra ? »
2/6 > 2 Korintiana 12 : 9
« Ampy ho anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahina amin’ny fahalemena ».
3/6 > Romana 9: 13-14
Izao no voasoratra « Jakoba no tiako, fa Esao ho halako » . Ahoana ary no holazaintsika ? Misy tsy fahamarinana va amin’Andriamanitra? sanatria izany !
4/6 > Romana 9 : 29
Raha tsy ny Tompo Andriamanitra no namela taranaka ho antsika. Dia efa tonga tahaka an’i Sodoma sy Gomora isika.
5/6 > Romana 10:4
Fa Kristy no faran’ny lalàna ho fahamarinana ho an’izay rehetra mino.
6/6 > Romana 10 : 12
Fa tsy misy hafa, na jiosy na jentilisa, fa iray ihany no Tompon’izy rehetra, sady manan-karena homeny izay rehetra miantso Azy Izy.
7/6 > Romana 11 : 4
« Izaho efa niaro fito arivo lahy ho ahy, dia izay tsy mba nadohalika tamin’i Bala »(1 Mpanjaka19:18)
8/6 > Romains 11:16
Raha masina ny santatra, dia masina koa ny vongany; ary raha masina ny fàkany, dia masina koa ny sampany
9/6 > Romana 11 : 36
Fa Andriamanitra no nihavian’izao zavatra rehetra izao, ary Izy no mihazona azy, sady Izy no antony; Izy anie no homen-boninahitra mandrakizay. Amena
10/6 > Salamo 108 : 4
Fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindramponao;
Ary mipaka any amin’ny rahona ny fahamarinanao
11/6 < Isaia 42 : 1
Indro ny Mpanompoko, Izay tantanako. Dia Ilay voafidiko sady sitraky ny foko. Napetrako tao aminy ny Fanahiko.
12/6 > Asan’ny Apostoly 2 : 4
Ary samy feno ny Fanahy Masina izy rehetra, ka dia niteny tamin’ny fiteny maro samy hafa, araka ny nampitenenan’ny Fanahy Masina zy.
13/6 > Actes 8 : 15
Nony tafidina tany Samaria i Petera sy Jaona dia nivavaka ho an’ny olona mba hilatsahan’ny Fanahy Masina.
14/6 > Salamo 109 : 4
Ny fitiavako dia valiany fandrafiana. Fa izaho dia mivavaka.
15/6 > Nomery 10 : 34
Ary ny rahon’ny Tompo Andriamanitra dia teo ambonin’ny fireneny nony andro tamin’ny niaingany niala tamin’ny nitobiany.
16/6 > Nomery 11 : 23
Dia hoy ny Tompo Andriamanitra : » Nihafoy va ny tànako? Ankehitriny ho hitanao na ho tanteraka aminao ny teniko, na tsia ».
18/6 >Nomery 12 :11
Ary hoy Arona tamin’i Mosesy : Indrisy, tompoko, masina ianao, aza atao ho helokay ny nanaovanay adalana sy ny naotanay.
19/6 > Nomery 13 : 27
Dia nankeo amin’i Mosesy sy Arona ny mpiasafo tany dia hoy ire hoe « Tonga tany amin’ny tany izay nanirahanao anay izahay; koa tondra-dronono sy tantely tokoa izy; ary itony ny vokatra azo tany
21/6 > Nomery 14 : 26-27
Ary ny Tompo Andriamanitra niteny tamin’i Mosesy sy Arona ka nanao hoe : » Mandrapahoviana no mbola handeferako amin’izao fiangonana ratsy mimonomonona amiko izao. Efa reko ny fimonomononan’ny fireneko , izay imonomononany amiko .
23/6 > Nomery 15 : 15
Ary ny amin’ny fiangonana dia lalàna iray ihany sy fanao iray ihany no ao aminareo sy izay vahiny eo aminareo koa, dia lalàna mandrakizay hatramin’ny taranakareo far mandimby izany; tsy misy hafa eo anatrehan’ny Tompo Andriamanitra na ianareo na vahiny.
24/6 > Nomery 15 : 26
Dia havela ny heloky ny fiangonana, dia ny Zanak’Israely rehetra, mbamin’izay vahiny eo aminy; fa nahazo ny olona rehetra izany noho ny ota tsy nahy.
25/6 > Nomery 15 : 41
Izaho no Tompo Andriamanitrareo, Izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin’ny tany Egypta mba ho Andriamanitrareo. Izaho no Tompo Andriamanitrareo.
26/6 > Salamo 147 : 3
Mahasitrana ny torotoro fo Izy
Sy mamehy ny feriny.
27/6 >Nomery 16 : 22
Dia nihankohoka izy roa lahy ka nanao hoe: » Andriamanitra ô, Andriamanitrin’ny fanahin’ny nofo rehetra, olona iray no nanota , ka ho tezitra amin’ny fiangonana rehetra va Ianao?
28/6 > Salamo 58 : 2
Moa ny tsy fitenenana va ataonareo ho filazana ny marina ?
Mitsara mahitsy va ianareo, ry zanak’olombelona ?
29/6 > Nomery 18 : 20
Hoy Andriamanitra tamin’i Arona : « Tsy mba hanana lova eo amin’ny tany ianao sady tsy mba hanana anjara eo aminy. Izaho no anjaranao sy lovanao eo amin’ny Zanak’Israely ».
30/6 > Salamo 60 : 4
Efa notoloranao faneva ny matahotra Anao.
Hatsangano noho ny fahamarinana